प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई संरक्षण दिए : पौडेल :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई संरक्षण दिए : पौडेल १४ माघ, पर्वत । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपराधीलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याका अभियुक्तलाई बचाएर मुलुकमा दण्डहीनता बढाउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो ।
नेपाल प्रेस युनियन पर्वतले आइतवार विहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पौडेलले हत्याका अभियुक्तले स्वम् हत्या गरेको स्वीकार गर्दै आफूलाई कारबाही गर्न भनिरहँदा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नै कारबाही नगर्न चिठी काटेर अपराधीको संरक्षण गर्न खाजेको वताउनुभयो । द्वन्द्वकालमा आफूहरुले कुनै आपराधिक काम नगरेको जिकिर गर्दै पौडेलले आफूहरुलाई जेल हालेर देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’अपराध गर्ने माओवादी नै जेल जानुपर्छ । हामी होइन । हामीले मान्छे मारेका छैनौँ । जसले मान्छे मार्‍यो त्यही जेल जानुपर्छ ।’
स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुन नसक्ने वताउनु भयो । पौडेलले राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमै सहमतीय सरकार गठन गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा जानु पर्ने वताउनुभयो । पौडेलले जेठमा निर्वाचन गराउने गरी काँग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्नु पर्ने वताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन गराउने जिम्मा काँग्रेसले पाए जेठभित्रै निर्वाचन गराई छाड्ने दाबी गर्नुभयो । पौडेलले भन्नु भयो,’जेठमा निर्वाचनमा जाने हो भने काँग्रेस नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ । ‘एकीकृत माओवादीले चुनाव गराउने सर्तमा जोसुकैको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार रहेको वताउँदै आएकाले काँग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने पौडेलको भनाई छ । तर पौडेलले एमाओवादी चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
12 Comments on “प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई संरक्षण दिए : पौडेल”
स्वतन्त्र व्यक्ति wrote on 27 January, 2013, 5:44
तपाइको ko matlob पौडेल afie mantiri huni bicharma 6n natra राजनीतिक दल ay PM banauna nasaky pachy ko hun6 PM to ta janta lay ni batauni6n (aylay ko samaya ma janta chop lagyra ramit hari rayak6n tara yo janatalay moun barta liyako6enan sadaie chop lagy ra basna ak din janta lay ni niskarsa nikal6n ) पौडेल sir.
लाजाराम wrote on 27 January, 2013, 5:49
बाबुराम जस्ता अभियुक्त ले अभियुक्तलाई नै साथ नदीयेर तपाई हरु जस्ता बकुमफ़्वाश लाई साथ दिन्छ
Lal wrote on 27 January, 2013, 6:10
हामीले मान्छे मारेका छैनौँ । जसले मान्छे मार्‍यो त्यही जेल जानुपर्छ पौडेलले पनि के कुरा गरे को होल यस्तो यस्को मद्लब १३ हजार मार्ने नेपाली सेना र नेपाली पुलिस सबैलाई जेल हल्ने अचम्मै छ कुर्सी को लागि जे मन्लग्यो तेही बोल्दा हुन्छ र भन्या नेपाली जनताले त केही बुझ्दैन जे भने पनि हुन्छ भन्ने सोच छ कि के हो नेपाली काँग्रेस र एमालेको नेता हरुले
Like or Dislike: 15 6[जवाफ फर्काउनुहोस्]
Bishwontar Sukubhatt wrote on 27 January, 2013, 6:22
के नौलो भयो र, अपराधीले अपराधीको संरक्षण गर्नु । त्यस्तो अपराधीहरुको संरक्षण पहिले पहिले कांग्रेसले गरेकै थियो, त्यो बिर्सनु भो कि पौडेलजी । जनताले त बिर्सेका छैनन् । PM लगायतका अहिलेका ठूला नेताहरु सबैनै अपराधीहरुको संरक्षक हो । देश र जनताको लागि क्यै गर्ने हैनन् । खालि कुर्सीकै लागि मात्र ….. ।
Sher Bahadur Deuwa wrote on 27 January, 2013, 6:24
यसलाई निर्बाचन हैन कुर्सि चाहिएको छ ,आफ्नो पार्टी माथि यत्रो गर्व थियो भने माओबादी ले तोकेको चुनाव मा जान किन खुट्टा कमाएको ? 17 पटक सम्म किन बने प्रधानमन्त्री का उम्मेदवार यिनी ? अब प्रचण्ड ले भने जस्तै 20-25 वर्ष सम्म मावोबादी कै राज हुन्छ ,नो चान्स बुढो ,,प्रधानमन्त्री बन्ने सपना ,, उडायो सपना हुरी ले ,,,,एसो भने कसो होला ?
digbijaya wrote on 27 January, 2013, 6:46
13000 janata ka hatyaralai kahile hunchha sajaya ramchandra g.dekendra thapa matra hanna ni tetikhera mareka .aphu chokho chhu jasto lageko chha ki timi pani testai hau.
जङ्गे रमेश wrote on 27 January, 2013, 6:48
एउटा अपराधीले अर्को अपराधीलाई स‌ंरक्षण नदिएर के दिन्छ त ???
Like or Dislike:31[जवाफ फर्काउनुहोस्]Malati Reply: January 27th, 2013 at 9:03 amExcellent comment
baburam wrote on 27 January, 2013, 7:27
sabai panimathiko obhano banna khojne
mula haru aafu le chunab garauda chunab hune aarka le garda nahune kasta neta chhan nepal ma ???????!! desh ra janta ko bare ma sochnu ko satta aafno satta sortha ma lagera bolchhan sabai chor haru
स्वतन्त्र व्यक्ति wrote on 27 January, 2013, 7:31
megh wrote on 27 January, 2013, 8:23
aba 17 hajar manche marne prachanda lai jail hallu parcha ani hesela dd lay gareko corroption ko kharan babu ram ra hesela lai pani jail hallnu parcha…
manoj neupane wrote on 27 January, 2013, 8:59
ढुंगाले भत्केका सडक जोड । त्यहाँ फ्याँक्ने
इँटाले स्कुल र अस्पतालका पर्खाल ठड्याऊ ।
मौकामा कमाएकै छौ, अब
देशका लागि केही गर । बलजफ्ती शासन गर्ने,
निरंकुशता लाद्ने, देश लुट्ने अनि जनता कुट्ने शक्ति आफैं बडारिनेछन् । बाटो रोक्ने र
गल्ली ढुक्ने ‘थर्ड क्लास’ चरित्र तत्काल
पूर्वबाट पसेको झरी पश्चिम पुगेपछि ‘बौलायो’
राष्ट्र बैंकको सफलता : तरलता समस्यालाई बाइबाई